Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland Oo Dood Iyo Falan-qayn Ka Yeeshay Heshiiska Ay Wada Gaadheen Soomaaliya Iyo Wakiilka UN-ka – Great Banaadir
Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland Oo Dood Iyo Falan-qayn Ka Yeeshay Heshiiska Ay Wada Gaadheen Soomaaliya Iyo Wakiilka UN-ka
Hargeysa (SOLNA) – Fadhi aan caadi ahayn oo Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland uu yeeshay maanta oo Sabti ah oo uu shir-guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa uu goluhu dood iyo falan-qayn ka yeeshay heshiis ay wada gaadheen Soomaaliya iyo Wakiilka UN-ka James Swan 15-kii Oktober 2020, oo ku saabsanaa nidaamka wada shaqaynta (Un sustainable development cooperation framework UNCF), kaas oo ay ka muuqato inuu meel ka dhac ku yahay Qarannimada Somaliland, faro-gelinna ku yahay Arrimaha Gudaha Somaliland.
Somaliland muddo soddon sanno ah wax sharci ah, shaqo ah, iyo wax wada lahaansho, lama wadaagin Soomaaliya. Somaliland marnaba dheg jalaq u siin mayso xeelad siyaasadeed, culays dhaqaale iyo mid warbaahineed oo lagu xagal-daacinayo jiritaanka Qarannimada Somaliland. Golaha wasiirradu waxa uu faray wasaaradaha ay khusayso arrimahaasi inay warbixin qoto-dheer ka keenaan. Golaha Wasiirada Somaliland iyagoo garowsan baahida dalku u qabo shirkado caalamiya iyo iskaashi dhaqaale, waxa uu dood ka yeeshay arrinta diyaaradaha Fly-Dubai iyo Air Arabia oo hore uga hawl geli-jiray Dalka Jamhuuriyadda Somaliland, balse hay’adda duulista hawada Somaliland shaqada ka hakisay.
Golaha wasiirradu waxay maareeyaha duulista hawada, garyaqaanka guud iyo xeer ilaaliyaha guud ka dhegeysteen warbixinta xogta rasmiga ah ee ku saabsan diyaaradahaasi, waxana uu goluhu xaqiiqsaday in shaqo-ka-hakinta diyaaradahaasi ay tahay arrin sharci madaama aannu jirin heshiis rasmi ah oo hay’adda duulista Somaliland la gashay hay’adda duulista ee dalka laga leeyahay diyaaradahaasi. Sidaa awgeed, golaha wasiiradu waxa uu isku raacay:-
In hakinta diyaaradahaasi socon doonto inta laga gaadhayo heshiis u dhexeeya labada hay’adood, iyadoo la waafajinayo shuruucda iyo xeerarka dalka.
In la xoojiyo heshiis dhexmara labada hay’adood ee duulimaadyada.
In laga hawl-galo dhamaystirka heshiiska labada dhinac, iyadoo kor loo qaadayo lana kobcinayo dhaqaalaha dalka.
Ugu danbayn Golaha Wasiirrada Somliland waxa uu hambalyo u dirayaa Xuska Maalinta Shuhaadada Somaliland oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 17-ka Oktober-2020. Goluhu waxa uu ku sifeeyey maalintan, maalinta geesiyaashii naftooda, maalkooda, iyo maskaxdoodaba u soo huray xornimada iyo madax-bannaanida dalkeena, xiliyo kala duwan laga soo bilaabo Halgalkii Gobonnimo Doonka Daraawiishta, Kacdoonkii Culimada, Aqoonyahanka, Suugaanlayda, Halgankii Axsaabta Siyaasadda, Halgalnkii Hubaysnaa ee SNM iyo Halganka Naftood-hurayaasha ilaa maanta naftooda halista u geliya difaaca jiidaha hore ee Dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaanay Alle uga baryeen intii dhimatay in Rabi naxariistii janno ka waraabiyo inta noolna Rabi caafimaad, cisi iyo sharaf ku waariyo. Dhammaanteen, shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumadduba waa inay ka qayb-qaataan sugidda iyo qoraalka taariikhda guunka ah iyo marxaladihii isdaba-joogga ahaa ee dalkeenu soo maray, si jiilalka soo socdaa u bartaan sooyaalkeennii nololeed iyo raad-raaca taariikhdeena.
Taiwan President Tsai Ing-wen calls for ‘meaningful dialogue’ with China
Qarax Loo Adeegsaday Mooto Bajaaj Oo Caawa Ka Dhacay Baydhabo